थाहा खबर: सिरोहियाजीको केएमजी होइन, ब्ल्याकमेलिङ इन्स्टिच्युट हो : व्यवसायी सुमार्गी
| माघ ३, २०७४ बुधबार
हेटौँडा : मुक्तिश्री प्रालिका अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गीले कैलाश सिरोहियाको कान्तिपुर मिडिया ग्रूप (केएमजी)लाई ब्ल्याकमेलिङ इन्स्टिच्युट अर्थात् बीएमआईको संज्ञा दिएका छन्।
व्यवसायी सुमार्गी संरक्षक रहेको हेटौँडा एकेडेमीको २०औँ वार्षिकोत्सवपछि बुधबार हेटौँडामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै व्यवसायी सुमार्गीले कान्तिपुरले ब्ल्याकमेलिङ इन्स्टिच्युटको काम गरेको भन्दै उसलाई बीएमआईको संज्ञा दिएका हुन्।
उनले सिरोहियाले बुधबार केएमजीका नाममा अर्को बिषवमनको कुचेष्टा गरेको आरोप लगाए। सुमार्गीले भने, 'मैले सम्पादकीय मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठाउँदा प्रकाशक वा सम्पादक बोलेका छैनन्। केएमजी नाम गरेको एउटा विजनेस फर्मले प्रतिरक्षा गरेको छ। यही हो पत्रकारिता? आफ्नो कागज, आफ्नो कमल, आफ्ना कुरा, जे गरे पनि भयो!'
कैलाश सिरोहियासँगको जग्गा खरिद प्रकरणबारे सुमार्गीले भने, 'कैलाश र उनकी श्रीमती आवद्ध काठमाडौं मार्टको जग्गा मेरो कम्पनीले खरिद गरेको थियो। तर उनले त्यो तथ्य नखुलाई अरूको नाम जोडेका छन्। त्यो काठमाडौं मार्ट आज कहाँ छ? जग्गा बेचेलगत्तै त्यसलाई किन मासियो? के त्यो संस्थाले कर तिरेको छ? खोज्नुस्। म त लडाइँ लड्न तयार छु। तपाईंहरूले पनि खोज्नुस्।'
व्यवसायी सुमार्गीले ब्ल्याकमेलिङविरुद्धको लडाइँबाट आफू पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, 'सिरोहियाजी यो प्रकरण मिलाइदिनुपर्‍यो भन्दै हारगुहार गर्दै हिँडेका छन्। तर म ब्ल्याकमेलिङ प्रकरणलाई बिट नमारीकन छोड्दिनँ।'
कान्तिपुरको ब्ल्याकमेलिङमा अहिलेसम्म सबै चुपचाप बस्न बाध्य रहेको भन्दै सुमार्गीले आफ्नो पछिल्लो कदमले कान्तिपुरका कर्तुतहरू उदा‌ंगिँदै गएको बताए। कान्तिपुरको ब्ल्याकमेलिङबाट पीडित धेरै जना सम्पर्कमा आएको र उनीहरू खुल्दै गएको जानकारी पनि उनले दिए।
कान्तिपुरले कहाँकहाँ ब्ल्याकमेलिङ गरेको थियो त? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा व्यवसायी सुमार्गीले भने, 'उनी ब्ल्याकमेलर नै हुन्। केवलकार होस् वा डाबर होस्। रामदेव बाबा, मुरारकाजी वा अरू विजनेस हाउस, कान्तिपुरले केके गरेको थियो? तपाईंहरूलाई थाहै होला नि!'
ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी ल्याई नेपाललाई समुन्नत बनाउन खोज्दा खेद्ने काम भएको सुमार्गीको भनाइ थियो। उनले भने, 'मेरो अर्गनाइजेसनलाई विदेशी लगानीकर्ताले पत्याएका बेला पूँजी एकीकृत गर्न खोजेको थिएँ। तर सिमेन्ट, हाइड्रो र टेलिकम सञ्चालन गर्न खोज्दा आतंककारी गतिविधि गर्न खोजेको आरोप लगाइयो। ब्ल्याकमेलिङका लागि मिडिया दुरूपयोग गरियो।'
काठमाडौं : सबै एनसेलका ग्राहकले अब सजिलै एनसेल एपबाटै विभिन्न ग्राहक सेवाका साथै आफ्नो आवश्यकताअनुसार सेवाहरू सुचारु गर्नसक्ने भएका छन्...
काठमाडौं : नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा तीन सयले ओरालो लागेको छ। तोलामा नै एक हजार १०० ले मङ्गलबार उकालो लागेको ...
काठमाडौं : डिजिटल इन्स्योरेन्समा उचाइ चुम्न सफल शिखर इन्स्योरेन्सले गत मंसिर १७ गतेदेखि शुरू गरेको च्याटबटमार्फत सेवा लिनेको संख्या दैनिक...
जाजरकोट : जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सकिएको छ। आयोजना निर्माणको कूल लागत १९ अर्ब ९० करोड ...
स्याङ्जा : पछिल्लो समय युवा पुस्ताको आकर्षण कृषि पेशातर्फ बढ्न थालेको छ। सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गर्ने कृषकको आकर्षण स्याङ्जामा ...
सिन्धुपाल्चोक : शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका-४, फुल्पीङ्कट्टीमा निर्माण गरिरहको अपर चाकु हाइड्र...
काठमाडौं : राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आज ५४ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। यस अवसरमा संस्थानले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। बीमा व्यवस...
काठमाडौं : नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ बढेको छ। हिजोको तुलनामा ११ सय रुपैंयाले बढेर छापावाल सुन आज प्रतितोला ९० हजार १ सय रुपैंया...